Ahoana Ny Fomba Hanazavan’ny Tantaran’ny Zika Ao Pôrtô Rikô Ny Fanjanahan’i Etazonia · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraFiruzeh Shokooh Valle
Voadika ny 21 Aogositra 2016 8:28 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Español, Nederlands, عربي, English
Sekolin'i Dadatoa Sam (US), zazavao haingana indrindra amin'ny ampira Amerikana ao amin'ny kanton'ny “sivilizasiona.” Navoaka voalohany tamin'ny lohateny hoe “Manomboka ny Fianarana” tamin'ny 25 Janoary 1899, navoakan'ny gazetiboky Puck. Avy amin'i Louis Dalrymple (1866-1905) [Azon'ny rehetra ampiasaina], Wikimedia Commons.
Ao anatin'ny “korontana” ny teratany. “Tsy nahomby” ny “ady amin'ny Zika”. Niala tamin'ny asany “tao anatin'ny rikoriko” ny mpanolo-tsainan'ny governora, ary nandeha niala sasatra any Espaina. Mielipatrana ny aretina. Vita ny “sasany”, “tamin'ny fomba mahomby indraindray.” “Mitombo isa” ao anaty kodiarana antitra ny moka. Tsy misy ny “drafitra avo lenta” hisorohana ny korontana. Amin'ny maha «ala nenina farany» tonga ny CDC mitondra famonoana biby kely naled (nasiana vokatra simika tsy maharitra): Saingy, andraso, misy poizina ny vokatra simika. “Nanohitra” ny fampiasa vokatra simika ireo teratany ary niampanga an'i Etazonia ho mampihatra ny «fanjanahana» (eny, anaty farango sosona!). Tsy te hampiasa ody famonoana moka ireo vehivavy bevohoka tsy mahalala, tia manohitohitra mba hiarovana ny zanak'izy ireo. Tena “tantara mampihoron-koditra.”
Tsy tamin'ny vanim-potoanan'ny Ady Espaniola-Etazonia, nandritra ny fanafihana sy ny fanjanahan'i Etazonia an'i Pôrtô Rikô, niaraka tamin'i Kiobà, sy Filipina, ary Guam ity tantara ity, fa ampahany tamin'ny tantara nivoaka tamin'ny 30 Jolay 2016, fanontana pirintin'i New York Times. Tadidy tao an-tsaina avy hatrany ireo sariitatra ara-politika niseho nandritra ny Ady Espaniola-Etazonia, raha nandray anjara lehibe tamin'ny fampahafantarana an'i Dadatoa Sam (US) ho toy ny mpamonjy ny teratany mitanjaka ampahany, mitoe-jaza ao amin'ny faritra mafana rotiky ny fahantrana sy ny aretina ny median'i Etazonia.
Tamin'ny tantara tao amin'ny NYT (New York Times) momba ny areti-mifindra Zika any Porto Riko, mazava ny fijerin'ampira. Misy fifanoheran-kevitra ihany koa ny tantara”
Tamin'ny tantara tao amin'ny NYT (New York Times) momba ny areti-mifindra Zika any Porto Riko, mazava ny fijerin'ampira. Misy fifanoheran-kevitra ihany koa ny tantara; fa raha tsy misy manao na inona na inona ao amin'ny nosy, nahoana no hoe ny vehivavy no mandray fepetra hiadiana amin'ny otrik'aretina Zika, sy ny mety hisian'ny fananana zazakely tratran'ny aretina microcephaly (loha misy rano), voalaza fa iray amin'ireo anton'ny fihenan'ny tahan'ny fahaterahana?
Taorian'ny famoahana ity lahatsoratra ity, namoaka fandaharana mampitandrina ny Pôrtô Rikàna ny filohan'i Etazonia sahiran-tsaina Barack Obama fa tsy maintsy mandray an-tanana ny otrik'aretina Zika amin'ny fomba hentitra izy ireo. Naneho ny fanohanany ny hafatry ny filoha ny governoran'ny nosy, Alejando García Padilla, saingy nilaza kosa ny sekreteran'ny Fahasalamana, Ana Ríus Armendáriz fa nahatsiaro “bedy” izy. Ary raha ny marina, tokony nahatsiaro ho bedy isika rehetra. Anisan'ireo mpitsikera hafa, nilaza ny ben'ny tanànan'i Bayamón, Ramón Luis Rivera – izay manohana an'i Pôrtô Rikô nanova ny sata ara-politikany avy amin'ny zaratany ho lasa fanjakana federaly fa tokony handray an-tanana ny sata “fanjanahan-tany” ao amin'ny nosy amin'ny fomba hentitra ihany koa ny filoha, sy ny famoahana ilay gadra politika 73 taona, Oscar López Rivera, izay nampidirina am-ponja tao Etazonia mandritra ny 35 taona.
Maro ireo firenena hafa manerantany miady amin'ireo aretin'ny faritra mafana. Vao haingana sy malaza indrindra ohatra i Brezila izay mampiantrano ny Lalao Olaimpika amin'ny fiadiana ny otrik'aretina Zika. Saingy tsy dia atao tsirambina tahaka izany ireo firenena ireo, angamba noho izy ireo fanjakana mizaka tena.
Niady tamim-pahombiazana ireo aretin'ny faritra mafana nandritra ny taona maro i Pôrtô Rikô. Tafaraikitra hatramin'ny taompolo 1960 ny aretina dengy, ary nifampitolona tamin'ny Tsikongonià isika vao haingana teo, ary Zika indray ankehitriny, ankoatra ny hafa. Anisan'ny fiainana andavanandronay ireo aretina izay toa manafintohina sy miavaka amin'ny olona ao Etazonia ireo.
Niady tamim-pahombiazana ireo aretin'ny faritra mafana nandritra ny taona maro i Pôrtô Rikô. Tafaraikitra hatramin'ny taompolo 1960 ny aretina dengy, ary nifampitolona tamin'ny Tsikongonià isika vao haingana teo, ary Zika indray ankehitriny, ankoatra ny hafa. Anisan'ny fiainana andavanandronay ireo aretina izay toa manafintohina sy miavaka amin'ny olona ao Etazonia ireo. Na ny sampan-draharaham-panjakana na ny olom-pirenena samy nampahafantarina tsara momba azy ireo. Nisy ny fampianarana fanentanana, sampana mpanadio, sy fitaterana mavitrika tamin'ny haino aman-jery. Ary, eny, mitohy ny fiainana. Manohy miasa, mitia, mivelona, sy miady tsy amin'ny otrik'aretina Zika ihany ny olona fa amin'ny zavatra maro izay mandrava kokoa: ny 100 taona maherin'ny fanjanahan-tany sy ny voka-datsiny marobe.
Vao haingana indrindra, manohitra fisehoana endrim-panjanahana hafa indray, amin'ny alalan'ny sampana mpanara-maso ara-bola napetrak'i Etazonia natao hanaramaso ireo fanapahan-kevitra maro raisin'ny governemanta i Pôrtô Rikô.
Ireo izay monina ao amin'ity nosy Karaiba ity dia efa nampahafantarina sy mahafantatra tsara, fa tsy zazakely tsy manam-piarovana mila vonjena, na koa bedesina. Ny zavatra fara faharatsiny ilainay, ary amin'izao fotoan-tsarotra eo amin'ny tantarantsika izao dia ny fandrakofana marina ataon'ny haino aman-jery mampiseho ny olona eo an-toerana efa voaentana—tantara mandray an'i Pôrtô Rikô sy ny olony amim-panajana, am-pamendrehana ary amin'ny maha-olombelona.